Ngwa ndị dị mkpa n'ezie iji bulie gam akporo? | Gam akporosis
Ngwa iji bulie gam akporo ọ dị mkpa n'ezie?
N'ime ụwa nke ngwa maka gam akporo, enwere ọtụtụ ngwaọrụ akpọrọ nke ekwesịrị iji rụọ ọrụ ebuli Android na-eme ka ụwa kasị eji mobile sistemụ arụmọrụ karị. Ma ihe bụ eziokwu na ngwa ndị a? Ha dị irè ma dịkwa mkpa maka arụmọrụ dị mma nke gam akporo anyị?
Ọzọ, aga m enye gị echiche nke onwe m banyere ngwa ndị a n'etiti njirimara ha na arụmọrụ ha na-ekwe anyị nkwa iji bulie gam akporo iji nweta arụmọrụ ka mma site na njedebe anyị karịa n'onwe ya, opekata mpe na etiti na njedebe dị elu, Ha bụ ezi laptọọpụ nwere teknụzụ nkọwapụta nke na-akarịkarị laptọọpụ.
Ọkachasị n'ụdị ngwa a o ngwaọrụ na-ekwe nkwa na-ebuli gam akporo n'ihi na a ukwuu ngwa ngwa, ọmụmụ ma ọ bụ ọbụna karị odi mfe ọrụ, anyị na-na-ahụkarị abụọ buru ibu iche iche. Nke mbụ n'ime ndị a nwere ike ịbụ oku nhicha ngwa o nhicha ngwa, nke a na-ejikarị ọtụtụ ngwaọrụ eme ihe Oghere ohere RAM, cache Cleaner ma ọ bụ faịlụ ọchụchọ faịlụ site na ibu iji mara ụdị faịlụ ndị na-eburu ebe nchekwa nke ngwaọrụ gam akporo anyị.
Ngwa ndị a na-akpọ "Ndị nhicha", n'ihi na m na ya na ha na-a doro anya ojoro na mgbochi maka anyị gam akporo ọnụ. Nke mbụ, n'ihi na anyị onwe anyị gam akporo sistemụ, n'ime ya Ntọala / Ngwa ha enweworị ngwa ọrụ ndị ga, dịka ọmụmaatụ doro anya cache na ebe nchekwa atọhapụ ya na-enweghị mkpa maka mpụga ngwaọrụ nke ụdị ọ bụla na ihe niile ha na-eme bụ jupụta esịtidem ebe nchekwa nke anyị Androids na-enweghị isi ngwa.
Banyere akụkụ nke RAM ma ọ bụ iji aka ya hichaa ya, iji ma ọ bụ iji ngwaọrụ ndị ọzọ iji mee ya. Aga m agwa gị otu ahịrịokwu: «A ga-eji RAM gam akporo dị oke mma, ọkachasị site na nsụgharị nke 4.0 gaa n'ihu, iji jikwaa nchekwa RAM na akpaghị aka nke anyị kwụsịrị iji mgbe ị na-ejikwa sistemụ arụmọrụ anyị chọrọ RAM na ọtụtụ usoro ihe ọmụma..
Enwere ike ịchọta ezigbo akaebe nke a mgbe anyị nwere ọtụtụ ngwa mepere emepe na-agbada n'okirikiri ma anyị na-anwa ịgba ọsọ egwuregwu ma ọ bụ ngwa a na-ewere dị ka nnukwu, n'oge ahụ, Sistemụ arụmọrụ gam akporo nwere ike imechi ngwa niile anyị nwere n'ime ndabere, iji nye ihe kacha mkpa maka igbu nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ e kwuru n'elu. Ọ dịtụla mgbe ọ bụla mere anyị na mgbe anyị na-ahapụ egwuregwu nke egwuregwu kachasị amasị anyị, anyị achọpụtala na ebe nchekwa RAM nke gam akporo anyị dị kpamkpam dị ka à ga-asị na anyị ejirila otu n'ime ngwaọrụ nchekwa nchekwa RAM a?
Naanị ihe anyị ga-enweta na ndị a Unkpọghe ma ọ bụ nhicha RAM na-erikwu batrị, ebe ọ bụ na mgbe iwepu ngwa ndị echekwara na RAM, sistemụ arụmọrụ ga-emepe ha kpamkpam site na mmefu mmefu nke akụnụba yana nnukwu mmiri na batrị nke ọnụahịa gam akporo anyị.
Banyere ụdị nke ngwa akpọrọ ejighị n'aka antivirus maka gam akporo, ihe ka ọtụtụ n’ime ha ịmalite bụ aghụghọ ma ọ bụ ojoro na naanị ihe ha mere na onye ọrụ ahụ bụ ihe a na-akpọ mmetụta placebo, ma ọ bụ otu ihe ahụ, ha na-enye anyị nchebe na-enweghị atụ na nke a na-ejighị n'aka nke nwere ike ịdị egwu.
Mgbe ahụ enwere ụfọdụ mmemme antivirus bụ n'ezie ngwa ndị ekwesịrị iji chebe gam akporo anyị, ọ bụ ezie na agwalarị m gị na ha dịkarịa ala, mana Ha bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ dị oke nchekwa na ha agaghị ahapụ gị wụnye ngwa na usoro APK n'ihi na n'ezie, n'ọtụtụ ọnọdụ ha ga-achọpụta ya dị ka trojan ma ọ bụ nje.
N'ihe banyere antivirus for Android adịghị mkpa maka m ebe ọ bụ na ọ ga-ezu iji soro ụfọdụ nkịtị uche iwu na-nchebe si dị iche iche egwu na-egwu na gam akporo sistemụ. Rulesfọdụ iwu nchekwa nke anyị nwere ike ịchịkọta na isi ihe ndị a:
Gbalịa budata naanị ngwa site na ụlọ ọrụ ngwa ngwa gam akporo. Echere m na Playlọ Ahịa Google.
N'ihe banyere ịwụnye ngwa na mpụga na Ahịa gam akporo, jide n'aka na saịtị ebe anyị na-ebudata ya yana na isi mmalite dị mma.
Ejila gam akporo anyị agagharị na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ebe ọ bụ na nke ahụ bụ ebe ọtụtụ ihe egwu anyị na-ahụ.
Lee anya mgbe niile ikikere nke ngwa na-ajụ anyị na anyị ga-arụnye na gam akporo anyị, ọbụlagodi ndị anyị na-ebudata ma ọ bụ wụnye site na ụlọ ọrụ gọọmentị dịka Play Store ma ọ bụ Amazon Apps.
Jikọọ na netwọk Wi-Fi tụkwasịrị obi.
Ejikọla Android anyị na kọmpụta ndị a na-amaghị ama dịka ụlọ ahịa oku, ọba akwụkwọ ọha, wdg, wdg.
Mee ka USB debugging kwụsị ma megharia ya mgbe anyi choro ya.
Nwere ikikere iji wụnye ngwa site na isi mmalite amaghi. Anyị ga-arụ ọrụ ha naanị mgbe anyị chọrọ ha.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụkpụrụ niile ma ọ bụ iwu niile m kọwara ebe a bụ iwu nke ihe kachasị dị ọchaDị ka ị gaghị ahapụ igodo ụlọ gị nye onye ọbịbịa ma ọ bụ hapụ ha ebe ọ bụla, iwu iji iji gam akporo gị eme ihe n'enweghị nsogbu ọ bụla dị ka ndị na-achịkwa ndụ gị kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Ngwa iji bulie gam akporo ọ dị mkpa n'ezie?
Oge a ekwenyeghị m gị, nke mbụ, na elu ma ọ bụ ọkara dị nso na 2 ma ọ bụ karịa Gb nke ebule ọ dị mfe ijikwa ya, ọ bụghị na obere ala na 512 mb nke ebule, sistemụ arụmọrụ nwere ihe karịrị 300 mb ndenye, ị ogide ee ma ọ bụ ee ebe nchekwa optimizer, M nwere Huawei g510 na ruo mgbe m wụnye Seeder ekwentị malitere ịbụ usable
Zaghachi Juan Carlos Melgarejo
Ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu JC Melgarejo, ọ bụrụ na ị nwere obere nso nke 512 mb nke ebule, ị chọrọ ma ọ bụ iji jikwaa ebe nchekwa ahụ, yana maka antivirus, ya mere, ọ bụ ya mere, e nwere ndị ama ama ama PC nke nwere ezigbo nsụgharị maka gam akporo, ụfọdụ dị ọkụ karịa ndị ọzọ, mana ha dị mkpa, ha anaghị emerụ ahụ, na ọgụgụ isi dịkwa mma, n'ezie
Ọ dị m ka ọ bụghị antivirus niile dị ka nke ahụ, na ndị na-eme ncheta na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ m nwere moto g m na-eji nna ukwu dị ọcha, otu oge m mere na m na-etinye egwuregwu site na playstore ọ dara ma kagbuo, yana Anọ m na-ewere ohere nke m na - enweghị ike ihichapụ ma ọ bụ jiri, ebe ọ bụrụ na m tinye nbudata ọzọ ọ malitere iweghere ohere, ọ mataghị ihe ebudatara, ọ nọ ebe ahụ mgbe m jiri nnabata dị ọcha na ọgwụgwọ dị nsọ. Ma maka antivirus, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ọ na - achọpụta ngwa "kachasị egwu" (n'ihi na ọ nwere ike ịdezi gam akporo) yana faịlụ nwere ike ịchekwa nje, ọ na - enye m nhọrọ iji hichapụ ma ọ bụ hapụ ha. Ex: Achọpụtara m na ọ bụ ezigbo ihe na cm
Zaghachi Nahuel Gomez Castro
Ekwenyeghị m na edemede ahụ. Ekwentị m bụ Samsung Galaxy s3 bụ n'efu na ngwaahịa ROM na 1Gb nke RAM na gam akporo 4.3, ana m ahụkwa ngwa nhicha dị mma n'ọnọdụ ụfọdụ, dịka nke m. E nwere egwuregwu dị arọ, lee Real Racing 3, nke nwere sekit (Circuit 24 heures - Le Mans) nke na-adọta ọtụtụ RAM, n'eziokwu, m ga-ahapụ ihe niile na ngwa mpụga (niile na otu igbe ọrụ 29 na 1) ebule enwere ike, enwere m ike ịgba ọsọ na sekit ahụ ma ọ bụrụ na enwere m opekata mpe 500MB nke RAM. Dika "na ochichi" enweghi ihe mmelite ozo a, enweghi m ike ighota ma oburu na uzo ozo nke gam akporo dika kitkat ihe nchekwa RAM ga adi nma, amaghi m ya. Oburu na enweghi m ngwa ozo, enwere m ike emela egwuregwu ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu ma ọ bụ ngwa ahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla, na-akwụsị m ma weghachite m na desktọọpụ isi, na-enweghị ohere nke izipu akụkọ, nke nwere ike mgbe ụfọdụ. Dịkwa ka m, amaara m okwu ndị ọzọ m kwadoro itinye ngwa a, ọkachasị ịhapụ RAM.
Nnọọ kwenyere gị jimg, enwere m 1 GB nke ebule na ekwentị yana mgbe ọtụtụ awa jiri, ebe m meghere ọtụtụ ngwa, ekwentị malitere "ịtụ ụjọ" ntakịrị, ana m enyefe ya Onye nkuzi Ọcha dị ọcha na ya na Voila !!, Ekwentị dị ka mmiri mmiri ma na-aza dị ka mgbe niile ... ... Anaghị m azụta na "ezigbo ncheta gam akporo kachasị mma", ọ bụrụ na ọ dị mma na ihe ndị a agaghị eme ....
Nwoke nke oge dijo
Ndị dị mfe: mgbọrọgwụ, mee ka ọ dị mma, nna ukwu dị ọcha na voila. Ekwentị dị ka silk
Zaghachi MAN nke oge
Echiche gị dị ezigbo nkwanye ùgwù.
01 • mana dịka ị kwesịrị ịma, anyị na-eji ngwa spkị nke ndị ọzọ maka ihe ndị na-adabaghị na taabụ ma ọ bụ fone nke anyị nwere site na nsụgharị ndị gara aga ma ọ bụ n'ihi na enweghịzi na google estore. Ya mere, agwala onwe gị na antivirus adịghị mkpa, kpachapụ anya karịa ịkwa ákwá
02 • Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na android usoro bụ ike nke ijikwa ebule ebe nchekwa na-emechi ngwa na-akpaghị aka. Ọ bụghị dị irè maka ọrụ a dị ka akpọsa ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji aka aka ya. Ka ịghara imechi ngwa ndị a meghere ọzọ, ị ga-aka akara ha ka ha wee ghara imechi
Zaghachi ka fredy valeriano
Ndewo onye ọ bụla, anọ m na-enyocha ọtụtụ ederede iji bulie HTC One x pucha oge ọ bụla m mepere chrome ọ ga-akpụkọta ma ọ dị otu a ruo ogologo oge m na-ahụ ụfọdụ ihe iji dozie nsogbu m ekwere m na ndị njikarịcha ahụ dị mkpa mana ọ dabere na ebe nchekwa RAM na ị jirila x afọ nna ukwu mechiri emechi wee meghee ngwa ahụ ọzọ .. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo echiche .. Agbalịrị m ihe niile ruo mgbe sel m lọghachiri dịka ọ si na frabica na ihe ọ bụla .. na site na nke ukwuu na nke ukwuu m gbalịrị na ngwa setCPU Root ... Nsọ usọbọ ugbu a m cell na-aga oké ibu ngwa ngwa na ihuenyo adịghị ifriizi mgbe m na-aga gburugburu ma ọ bụ ihe ọ bụla oké magburu onwe niile i nwere ime bụ na-akpata mgbọrọgwụ ... Mana ị nwere ike ịhụ ihe dị iche na ọ dịghị mkpa iji Master dị ọcha ... Ngwa a abụghị ọrụ na-egbu onwe ya ... Ihe ọ na-eme bụ imeziwanye ọsọ nke sel processor, naanị ị hazie ụfọdụ parameters na voila enwere ọtụtụ nkuzi ... ana m akwado ya ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwe cell-end-end ... m HTC… ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu maka m…
Zaghachi nye Christian avila
Kedu ka ngwa ndị a dịruru na ekwentị ọgbara ọhụrụ dịruru mkpa, ebe ọ bụ na ebudatara m Psafe echefuru m ọtụtụ ihe na-echegbu m n’oge gara aga.
Ngwa ndị a niile adịghị mma, naanị ihe ha na-eme bụ iri ihe onwunwe na ijikọ na Internetntanetị, ya bụ, ha na-ahapụ ekwentị gị nwayọ nwayọ karịa esemokwu, ọ dị mma? Na mgbakwunye na-arụ ọrụ dị ka spyware
Agbalịrị m nna ukwu ahụ dị ọcha, nna ukwu UI wdg, naanị ihe m nwetara bụ na ekwentị na-ekpo oke ọkụ na 60% nke ukwuu na ihe nkiri ihuenyo mere balloons, ọ gbapụghị fart cell. Ihe m ma bu na ya nwere avast o doziri okwu banyere ibu a otutu mana o ka na enyo antivirus enyo, ha bu ndi nledo.
Ami ga-akpụkọta na oge ụfọdụ melite ọsọ rue mgbe ekwentị m ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-arụ ọrụ ugbu a anaghịzi m etinye ihe ọ bụla Mobo m na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị aghụghọ ma ọ bụ aghụghọ.
Otu n'ime ihe m hụrụ ebe ahụ, nke kacha masị m na ọ kachasị rụọ ọrụ kachasị mma iji bulie ohere nke ekwentị m bụ nke m ga-egosi gị, enwere m olileanya na ọ na-enyere aka
Black Friday bụ Amazon bụ: mkpọ nke ihe karịrị 40 n'efu na-akwụ ụgwọ karịa valu 100
Ninja agbụrụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ na NinJump Dash